I-iPhone XS Max vs Samsung Galaxy S10 +: uvavanyo lwesantya | IPhone iindaba
UIgnacio Sala | | Iapps zokusebenza, Ukhuphiswano
Izixhobo zeApple zihlala zibonakaliswa ngokuba nakho sebenza ngokugqibeleleyo nge-RAM encinci. I-iPhone XS Max ilawulwa yi-4 GB ye-RAM, iyifowuni ye-Apple, kunye ne-XS, inememori engaphezulu ngaphakathi ukuba siyithelekisa nazo zonke iinguqulelo zangaphambili kwaye singabala i-iPad Pro.
Ukuba nenani elikhulu le-RAM, kuvumela inkqubo ukuba inganyanzelwa ukuba ihlale ivala usetyenziso ngokweemfuno zakho, kuba i-iOS ngokuzenzekelayo ikhathalela ukuvala usetyenziso ngokweemfuno zakho. I-Samsung Galaxy S10 + iyafumaneka kwiinguqulelo ezimbini: 8 kunye ne-12 GB ye-RAM. Ukuba ufuna ukubona ukusebenza kuthelekiswa neXS Max, ndiyakumema ukuba uqhubeke nokufunda.
Kwi-Android, inkumbulo yinto yonke, ukuba ayisiyiyo phantse yonke into. Ukusebenza kwesixhobo ngokubanzi uxhomekeke kakhulu kwimemori onayo, Ukuvumela ukuba ungagcini ukuvula iiapps ixesha elide, kodwa uphinde uzivule ngokukhawuleza ngaphandle kokulinda amaxesha okulayisha kuqala.
Ubungqina obulungileyo boku, siyabufumana kwividiyo esikubonisa yona kule migca. Kule vidiyo, sinokubona ukusebenza kwe-Samsung Galaxy S10 +, i-terminal elawulwa yi I-Qualcomm's Snapdragon 855 kunye ne-8 GB ye-RAM.
Le vidiyo ayibonisi ukuba indibaniselwano yenkqubo entsha yeQualcomm kunye ne-8 GB yememori, yenza njani isixhobo sihamba ngokukhululekileyo ngokuvula nangokuvala usetyenziso. Ngapha koko, uninzi lwamaxesha, iyakwazi ukuvula usetyenziso ukususela ekuqaleni kwaye ivulwe ngaphambili, ngexesha elingaphantsi kwe-iPhone XS Max.
Nokuba sithini na isibalo uGeekbench uphosa ngaphandle kwesi sixhobo, eyona nto ajongayo umsebenzisi kukusebenza kwesixhobo, ayisiyiyo imali yokuqhubekeka onokuyenza ngee-cores enye okanye nangaphezulu. Into ecace gca yeyokuba zombini i-iPhone XS Max kunye ne-Samsung Galaxy S10 + ziiterminal ezinkulu kuye nakubani na okhangela i-smartphone ephezulu eza kuhlala iminyaka embalwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iapps zokusebenza » I-iPhone XS Max vs Samsung Galaxy S10 +: uvavanyo lwesantya
I-White House inqume imeko yongxamiseko lukazwelonke kunye namanqaku